Wafti uu Hogaminayo Hoganka Arimaha Dibada JWXO Cabdiraxman Mahdi oo ka dagay Finland | Ogaden News Agency (ONA)	الأخبار بالعربية
Wafti uu Hogaminayo Hoganka Arimaha Dibada JWXO Cabdiraxman Mahdi oo ka dagay Finland
Jaaliyada Somalida Ogadenya ee dalka Finland ayaa galabnimadii maanta si diiran usoo dhaweeyay wajigii hore wafuud uu hogaaminayo Hogaanka arimaha dibada Jwxo mudanne Cabdirahmaan Sheikh Mahdi Maadey.
Masuulka ayaa ka qeyb qaadan doona shir Ururka Dhalinta Somalida Ogadeniya ee OYSU Qaarada Europe ay ku qabanayaan magaalada Helisinki ee wadanka Finland. Waxaana hoggaanku uu shirka ka yahay marti sharafta ka hadli doona. Waxaa la filaya in hoggaanku uu kusugnaado goobtaas isaga iyo wufuud kale oo kasocda Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeniya mudada shirkan dhalint ka socda caasimada Finland.
Shirka Dhalinta ayaa ah mid sanad le ah oo sanad kasta lagu qabto goob kamid ah qaarada Europe. Waxaana sandkan kii ka horeyay uu ka dhacay magalada Oslo ee Wadanka Norwey.
Wufuuda shirka oo ay kamid yihiin aqoonyahano iyo qeybaha bulshada Somalida Ogadeniya ayaa waxaa sioo kale ilaa hadda iska soo dabadhacaya wafuud kakala timid wadammada ay kakooban tahay qaaraddan yurub.
jawiga iyo sawaxanka ayaa wuxuu maanta ahaa mid shacabka somaiyeed ee walaalahanahay iyo shacabka finnishka ee dalkan ay iswaydiinyen meeqaamka shirka dhalinyada ee qaaradda yurub kadhacaya wadanka finland kana furmaya maalinnimada isniinta hadii alle iidmo.
haddaba jaaliyadda somalda Ogadenya ee wadanka Finland oo looga bartay martisoorka iyo soo dhawaynta shirarka noocan oo kale ah isla markaana mararkala duwan marti galisay shirkii jaaliyaadka 2007 – shiriii dhalinyarada 2009 iyo shirarkale oo badan ayaa sanadkana si heer sare ah isugu diyaarisay soo dhaweynta iyo hirgalinta shirkan dhalinta OYSU.
Wafuuda dhalinyarada ee ka kala socotay dallalka qaarada europe ayaa waxaa laga dheehanayay wajiyadooda farxad ay ku faraxsan yihin wax ka qabashada howlaha muhiimka u ah shacabkan dulman ee Ogadenya kunool wayadan ayaa waxaa sixoowli ah ku socda howlaha kala duwan ay wadaan ururka midowga dhalinta iyo ardayda somalida Ogadenya ee daafaha aduunka.
Shirkan ayaa ah shir qaarad kastaba ururada dhalinta OYSU gooni u qabsadan sanad kasta, waxaana mid kan la mid ah hada uu kasocda magaalada Perth, Australiya oo shirkii qaarada OYSU Pacific, Waxa bishan bilowgeedi OYSU Africa si guul ah magalada Kenya ugu qabsomay shirka noocan oo kale ah halka bishii hore qaarada America ay OYSU North AMerica ku hirgalisay magalada Meneapolis shirka noocan oo kale ah.
Hadaba shirka oo bari si toos ah u furamaya kala soco ONA
Short URL: http://www.ogadennet.com/?p=13997
Posted by maamule on Jul 15 2012. Filed under Warar.
Last 24 hours: 6,935 Last 7 days: 58,151 Last 30 days: 244,175 Online now: 24 Traffic Counter